Meltblown Non Yakarukwa Jira Vagadziri & Vatengesi | Rayson
Rayson asina ruchimbo mutengesi anogadzira uye mutengesi muChina.
Pp Spunbond Kwete Yakarukwa Jira
SS Non rakarukwa jira
Medical Non rakarukwa Jira
Zvekurima Zvisina Kurukwa Jira
Frost Kudzivirirwa Fleece
Non rakarukwa Weed Control jira
Asina kurukwa Tafura
Sms Non rakarukwa Fabric
Meltblown Kwete Yakarukwa Jira
Tsono Punch Non rakarukwa jira
Spunlace Non rakarukwa Fabric
Meltblown isina rakarukwa jira inogadzirwa kubva kune yakasarudzika nzira yekugadzira isina yakarukwa jira ine yakanaka kwazvo tambo. Iyo yakanyungudika-yakaridzwa isina-yakarukwa jira chinhu chakakosha pakugadzira kumeso masiki anodzivirira vashandi vekurapa kubva kune nyowani coronavirus. Iyi yakanyungudika-yakapepetwa firita jira ndiyo yakakosha chikamu chemafema anogona kupa ruzhinji rwekudzivirira. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumuchina wekufema unoraswa, masiki ekuvhiya, masiki ekumeso, anoshandiswazve guruva kufema, uye zvekufema zvekuvhiya. Sezvo hutachiona huchipararira kutenderera pasirese, iwo masks ekumeso ari kushomeka.
Meltblown isina ruchiva machira 25gr ye mask
Chii chinonzi melt blown machira akagadzirwa?Meltblown isina ruchimbo inogadzirwa kubva kune inokosha maitiro ekugadzira isina ruchimbo nemachira ane mavara akanaka kwazvo. Meltblown isina ruchimbo ruchiva chikamu chakakosha cheMask iyo inogona kupa ruzhinji rwechidziviriro. Iyo isina ruchimbo yemachira emask ine electrostatic adsorption basa, iyo inogona kuchengeta mabhakitiriya kunze. Rayson inyongwe blown jira mugadziri, kupa meltblown isiri yakarukwa yemucheka 25gr ye mask.
Meltblown isina ruchimbo
Melt Blown isina ruchimbo inogadzirwa kubva kune inokosha maitiro ekugadzira isina ruchiva nemachira akanyanya kuwanda. BFE 99% Yungunika-inodengenyeka inoshandiswa zvakanyanya kugadzira masokisi echiremba, masokisi akasviba, uye kutengesa zvakanyatsonaka uye zvakakurumbira mumunda wakasarudzika. Microfibers inopa nzvimbo yakakwirira nzvimbo yekunhuhwirira kwakanaka uye filtration hunhu. Inotsvanidzira kuyambuka-hutachiona pakati pevanhu uye nekupararira kwebhakitiriya rakasiyana-siyana mumwaka wakasiyana. Izvo zvinogona zvakare kudzivirira pollen allergy uye kuderedza kukuvadzwa kwezvinhu zvinokuvadza mumuviri wemunhu. Zvinodiwa navanachiremba, vanamukoti, uye vamwe vashandi vekurapa.
Electrostatic Adsorption Meltblown isiri yakarukwa machira 25gr ye mask
Meltblown isina ruchimbo inogadzirwa kubva kune inokosha maitiro ekugadzira isina ruchiva nemachira ane manyorerwo e.. Chimiro chayo cheElectrostatic adsorption inochengeta mabhakitiriya kunze.